Dabeylo ka socda Xeebaha Soomaaliya oo dad ku dhintay, kuwana nolosha lagu la’yahay | KEYDMEDIA ONLINE
Dabeylo ka socda Xeebaha Soomaaliya oo dad ku dhintay, kuwana nolosha lagu la’yahay
Roobabka xagaaga ayaa sanadkaan isku bedelay kuwa dabeylo wata, oo maalin waliba ka da'a dhul-xeebeedka, oo Muqdisho ugu badan tahay.
MUQDISHO, Soomaaliya – Soomaaliya waxaa xilligan ka da’aya roobabka xagaaga oo dabeylo wata, kuwaasoo hakad geliyay howlihii kaluumeysiga Badda iyo dadweynaha u dabaasha tagi jiray xeebaha deegaanada Soomaaliya.
Waxaa isa-soo taraya digniinta ay soo saarayso Dawlad Goboleedyada iyo Dawladda Dhexe, oo ka digaya qatarta ka imaan karta dabeylaha ka socda Badda, oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka ku tiirsan dhaqaalahooda kalluumeysiga.
Keydmedia Online oo arintaan dabagal ku sameysay ayaa soo ogaatay in ku dhawaad 10 ruux ay ku geeriyoodeen labadii todobaad ee la soo dhaafay xeebaha Soomaaliya, halka tiro intaa ka badanna weli nolosha lagu la’yahay.
Todobaadkii la soo dhaafay xeebta Liido ee Muqdisho waxaa ku geeriyooday 3 ruux oo dhalinyaro ahaa, kuwaasoo badda la tagtay xilli ay dabaalanayeen biyaha.
Dhalinyarada ayaa la sheegaya in ay ka koobnaayeen 5 oo isku Iskuul ahaa, oo sanadkii ugu dambeeyay ee Dugsiga Sare ku jiray, waxaana lagu waayay xeebta Liido Khamiistii lasoo dhaafay, iyadoo 3 kamid ah badda qaaday, kadibna markii labo maalin kasoo wareegatay ay Meydadkooda badda soo tuftay.
Dhinaca kale, Maamulka Koonfur Galbeed ayaa xaqiijiyay in magaalo xeebeedka Marka ee Caasimadda Gobolka Shabeellaha Hoose lagu la’yahay 13 Doomood, oo nooca kalluumeysiga ah, waxaana la xaqiijiyay geerida 6 ruux oo badda xeebteeda laga helay.
Saraakiisha Maamulka ayaa sidoo kale bulshada ku dhaqan xeebaha uga digay in ay Badda galaan xiligan, maadaama laga cabsi qabo in ay markale da’aan roobab dabeylo xooggan wata, oo sababay dhimasho iyo inuu hakad galo howlihii kalluumeysiga